युवाले फेर्दै मधेशको विवाह परम्परा - Thoskhabar
सरकारी जागिरे राम सागरले गरे आदर्श विवाह
बर्दिबास, फागुन ८ गते ।
‘विवाह गर्नु भयो, दाइजो कति लिनु भयो ?’ मैले उनलाई फोनमा प्रश्न गरे ।‘एक पैसा पनि लिएको छैन,’ मेरो प्रश्न नझर्दै उनले उत्तर फर्काए । ‘अरुले विना दहेज विवाह गर्दैन ? तपाईंले विवाह गर्दा दाइजो किन लिनुभएन ?’अर्को प्रश्न थपें ।
‘अब पनि दाइजो लिएर विवाह गर्ने हो र ? केटी मनपसन्द भयो,व्यवहार मिल्यो, पढेको भएपछि यसमा दाईजोले के अर्थ राख्छ र ? मलाई लाग्छ कुनै अर्थ राख्दैंन ।’
माथि उल्लेखित सवाल महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख राम सागर यादव र ठोस खबर बीचको हो । विवाह भन्ने वितिकै कति दाईजो लियो ? भन्ने आम प्रश्न मधेशमा हुन्छ । विवाह गर्दा कति दाइजो लियो वा दियो जिज्ञासा केटा पक्ष र केटी पक्षसंग छरछिमेकी, साथीभाई राख्छन् ।
केटा जती पढेका हुन्छ, त्यती बढी तिलक । झन् सरकारी जागिरे र धनीमनी भए त्यसको मोल लाख हुदैं करोंडसम्म पुगिरहेको छ । आधुनिक पुस्तामा हुर्किदैं गरेका लेखा प्रमुख यादवले गत फागुन ५ गते आर्दश विवाह गरेर दाइजोरहित विवाह गर्न अरुलाई प्रेरित गरेका छन् ।
महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–४ का बेहुला यादवले सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–११ गदहवाकी निर्मला यादवसंग आदर्श बिवाह गरेका छन् ।‘विवाह भनेको दुई आत्माको प्रवित्र बन्ध हो । यसमा कुनै शर्त मान्य हुदैंन । बेहुला र बेलुलीको मन मिलेपछि दहेज फिक्का हुन्छ,’राष्ट्र सेवामा क्रियाशिल रहेको बेहुला रामसागर भन्छन्,‘सबैले स्वतन्त्र भएर वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन पाउनु पर्छ ।’
Previous articleसरकारसँग वार्ता गर्न विप्लव समूह सकारात्मक
Next articleमालपोत कार्यालय बाराका प्रमुख ६ लाख घुस पक्राउ